Tantaran'ny logo Tesla | Famoronana an-tserasera
Ny orinasa tsirairay, ny marika manokana, ny orinasa ... dia manana logo mamaritra azy. Izany dia tokony hanambatra ny fototry ny zavatra ataonao sy izay tianao ho takatry ny hafa momba ny marikao. Saingy fantatrao ve ny tantaran'ny logo Tesla?
Alohan'ny hanontanianao dia tsy maintsy miverina an-taonany maro isika, satria na dia fantatra amin'ny anarana hoe fiara mandeha amin'ny herinaratra aza izy io, dia efa niasa tany Etazonia izy ireo tamin'ny 1900. Inona no nitranga nahatonga azy ireo tsy nahomby? Inona no ifandraisany amin'i Tesla?
1 Ny tantaran'i Tesla
2 Inona no dikan'ny T ao amin'ny logo Tesla?
3 Iza no namorona ny logo Tesla
4 Ny fivoaran'ny logo Tesla
5 Inona no lazain'ny logo amintsika
Ny tantaran'i Tesla
Araka ny fantatrao, Tesla dia marika fiara Elon Musk ary noforonin'i Martin Eberhard sy Mark Tarpenning tamin'ny 2003. Na izany aza, ny tompony ankehitriny dia Musk.
Testa dia nomena anarana taorian'ny mpahay fizika sy mpamorona Nikola Tesla.
Ary izany, raha tsy fantatrao, ny logo Tesla dia toy izao satria ampahany amin'ny sombin-javatra noforonin'ny tenany manokana i Tesla, ampahany amin'ny motera elektrika, izay noforoniny mihoatra ny 125 taona lasa izay.
Raha ny marina, tamin'ny 1901 dia efa nisy ny fiara elektrika tany Etazonia, ary nampiasaina izy ireo. Ny tarehimarika dia milaza amintsika fa ny 38% amin'ny fiara any Etazonia dia herinaratra. Dia inona no nitranga?
Eny ary, tonga ny fiara lasantsy izay mora kokoa (efa ho intelo noho ny herinaratra elektrika) izay nahatonga ny varotra an'ireto farany nihena be, ary izany no nahatonga azy ireo tsy hamokatra intsony tamin'ny 1930.
Tamin'ny taona 1990 vao nihaona ny injeniera elektrika sy mpamorona solosaina iray ary nanomboka namokatra mpamaky e-boky voalohany, izay fahombiazana lehibe. Saingy taty aoriana dia tonga tamin'ny fiara elektrika izy ireo, nanangana Tesla Motors tamin'ny 2003.
Ary ahoana no hidiran'i Elon Musk ao amin'ny orinasa? Amin'ny alalan'ny fampiasam-bola. Ary i Musk dia nampiasa vola tao amin'ny orinasany, nahatonga azy io naneno sy namerina ny fiara elektrika teny an-tsena. Toy izany no nitranga tamin'ny nisehoan'ny fiara Tesla voalohany, tamin'io taona io ihany, izay ny logo dia T. Saingy tsy fantatra tamin'ny voalohany hoe inona no asehony, ary hitan'izy ireo ho toy ny taratasin'i Tesla fotsiny izany nefa tsy fantany ny dikan'izany. manana.
Inona no dikan'ny T ao amin'ny logo Tesla?
Araka ny efa nolazainay taminao teo aloha, ny T ao amin'ny logo Tesla dia tena ampahany amin'ny fizaran'ny motera elektrika noforonin'i Nikola Tesla.
Raha ny zava-misy dia boribory ilay sombin-javatra, misy famaky maro, toy ny kodiaran-droa, ary ny zavatra nataon'izy ireo dia naka ampahany tamin'izany izay nanao simulation ny marika T.
Raha ny marina, voalaza fa ny mpamorona mihitsy no nampiasa ny drafitra manokana nataon'i Nikola Tesla ho an'ny motera elektrika ananany mba hanao sary fizarana mitovy amin'ny T ary nanapa-kevitra ny hiara-miasa aminy mandra-pahazoany izay hitantsika ankehitriny ao amin'ny logo.
Iza no namorona ny logo Tesla
Rehefa avy nahalala ny tantaran'ny logo Tesla isika dia tsy maintsy miresaka momba ireo mpamorona an'io endrika io. Ary izy ireo no studio famolavolana RO Studio. Izy ireo dia tonga tamin'ny hevitra hanatevin-daharana ny marika, Tesla, ary koa ny iray amin'ireo famoronana mifandray indrindra amin'ny fiara elektrika, ao amin'ny logo.
Ny fivoaran'ny logo Tesla
Tamin'ny voalohany, ny dikan-teny voalohany amin'ny logo Tesla dia nanana ampinga tao ambadiky ny T. Mainty ny litera raha volafotsy ny ampinga mba hisongadina. Na izany aza, tsy naharitra ela ny logo toy izany ary taona maro taty aoriana dia nanapa-kevitra ny hanary ny ampinga izy ireo, ka namela ny lazany ho an'ny tenany.
Amin'ny toe-javatra sasany, ny logo dia tsy ny T ihany, fa eo ambany (indraindray etsy ambony) ny teny Tesla dia apetraka, amin'ny litera lehibe ary manavaka ny E sy ny A (ny E dia bara telo mitsivalana tsy mikambana ary ny A no ambony. ampahany tsy miankina amin'ny tapany ambany.
Ankehitriny, ny logo dia azo ampifanarahana amin'ny loko samihafa, indrindra amin'ny telo: mena, mainty ary volafotsy.
Inona no lazain'ny logo amintsika
Rehefa hita ny fango Tesla, dia misy qualifiers toy ny rendrarendra, hery ary kanto rehefa mamaritra azy. Ary ho an'ny maro dia marika ambony izy io, izany hoe lafo, ary tsy azo atao na iza na iza. Azo lazaina fa marika sybaritika io ary vitsy ihany no mahavidy ny vidin'ny fiara.
Saingy tsy isalasalana fa mametraka kalitao sy fahatokisana ihany koa izy io. Na dia lafo aza izy ireo, dia azo itokisana ny fiara ary nanokatra ny ho avin'ny fihetsiketsehana elektrika.
Noho izany, ny fango dia mampiseho fa ny olona manana fiara Tesla dia olona manana toerana ambony (izay mahavidy ny fiara sy izay rehetra miaraka aminy).
Fantatrao izao hoe inona ny tantaran'ny logo Tesla, azo antoka fa rehefa hitanao izany ny zavatra voalohany ho tonga ao an-tsainao dia ny hahitanao ny endrik'ilay sombin-javatra feno izay nakana ny logo manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny tantaran'ny logo Tesla
Fandaharana famolavolana sary maimaim-poana